Topimaso momba ny orinasa - OUZHAN TRADE (SHANGHAI) CO., LTD
Ouzhan Trade (Shanghai) Co., Ltd. dia miorina ao amin'ny Building 38, valan-javaboary Jinguo, làlana 500 Zhenkang, distrikan'i Jinshan, Shanghai, manana traikefa momba ny famolavolana CNC matihanina mihoatra ny 15 taona any Shanghai izahay, indrindra amin'ny fikosoham-bary CNC, CNC fihodinana, fametahana milina fanodinana, fametahana CNC, fametahana cnc axis 4/5, fitotoan'ny tany, fanapahana laser, fametahana vy misy vy Ny orinasanay dia mandrakotra velarantany 1 200 metatra toradroa, ny isan'ny mpiasa dia manodidina ny 30, mpitantana teknika 10, mpanara-maso kalitao 5. Fitaovana famokarana lehibe mihoatra ny 30 set.
Endri-javatra amin'ny Machine CNC
1. Mampiavaka ny milina CNC
Zava-dehibe ny manamarika eto fa ny fitaovan'ny milina CNC dia matetika miaraka amin'ny tompona fanovana fitaovana mandeha ho azy ary fehezin'ny programa. Noho izany dia miharihary fa ny fizotran'ny asa dia mifantoka kokoa amin'ny natiora. Amin'ny milina CNC rehetra, misy rafitra fandrefesana elektronika ampiasaina amin'ny axis mifehy tsirairay. Ny rafi-pandrefesana dia matetika ampiasaina amin'ny milina CXNC amin'ny famantarana ny toerana misy ny slide amin'ny slideway.
Ireo rafitra ireo dia mitana andraikitra lehibe ihany koa amin'ny famolavolana ny latabatra spindle sy ny fandrefesana ny tena hafainganam-pandehan'ilay ampela. Ny fifehezana ny CNC no singa lehibe amin'ny milina CNC. Ny fifehezana CNC vaovao dia novolavolaina ho an'ny rindranasa tsotra mifandraika amin'ny famadihana ireo ivon-toeran'ny milina sy ny fitotoana. Etsy ankilany, ny fanaraha-maso isa nomerao amin'ny solosaina dia mamela ny fanaraha-maso tsara kokoa ny famaky isan-karazany, ahafahan'izy ireo mampiditra haingana ny toerana. Andao jerentsika kely ny sasany amin'ireo tena mampiavaka ny milina CNC.
2. Rafitra fanosorana mandeha ho azy
Tsara ny manamarika eto fa afaka mahazo fahatokisana maharitra ianao avy amin'ny fitaovan'ny milina izay miankina amin'ny fandaharam-pikojakojana sy fanosorana matetika. Zava-misy matetika hita fa ny fanosorana tsy kely loatra ny bearings dia mety hanimba azy ireo mialoha ny fotoana. Ankoatr'izay, ny fanosorana tsy ampy dia mety hanimba ny lalamby. Raha lazaina amin'ny teny hafa, raha misy ny tsy fahampian'ny lubrication dia hihena ny fahamarinan'ny masinina.
Matetika, lafo ny manamboatra vola lany amin'ny milina CNC. Noho izany, misy dikany ny misafidy ireo masinina CNC izay misy milina fanosorana tena. Izy io koa dia antsoina hoe lubrication mandeha ho azy, izay ampifandraisina amin'ny manifold afovoany ny fiterahana tsirairay. Ny dispraisera fanosotra dia manome otran'ny menaka azo ovaina sy azo tsindriana isaky ny miteraka.
3. Ny Transitivity ny fizotran'ny machining CNC dia tsara kokoa
Aorian'ny fanesorana sy fanamarinana ny fizotry ny fanapahana fanandramana dia azo apetraka ny fivezivezena ao amin'ny milina CNC mba hitsimbinana fotoana be pitsiny sy hiantohana ny kalitao miaraka amin'izay. Ankoatr'izay, ny fizotrany dia azo ampiasaina ho modely ho an'ny fanodinana manaraka ireo faritra hafa mitovy amin'izany. Noho izany, miaraka amin'ireo fiasa miampita an'ny milina CNC, dia azo alahatra ny fizotran'asa isan-karazany manerana ny indostria.
4. Safidy spindle amin'ny milina CNC
Ny masinina CNC 3-axis sy 5-axis dia samy manana ny safidiny raha ny spindles no jerena. Ny spindles HSD sy Perske dia efa voadona mafy eo amin'ny sehatry ny milina CNC. Mahomby izy ireo ary afaka mandray enta-mavesatra amin'ny fiantohana ny marina tsara indrindra miaraka aminao. Ankoatr'izay, ny paompy banga dia singa tsy voatery ao amin'ny milina CNC. Ny paompy vakumana dia manome tanjaka sy fitoniana amin'ny fametrahana milina CNC.
5. Fitaovana halavan'ny fitaovana mandeha ho azy
Ny mpanamboatra halavan'ny fitaovana mandeha ho azy dia afaka manao ny masinina 3-axis sy 5-axis CNC. Ny rafitra fandrefesana ny halavany dia tena marina. Ankoatr'izay, izy ireo dia misy M-Code tokana izay manatanteraka ny fisafidianana ny fitaovana amin'ny tontolo mandeha ho azy. Ankoatr'izay, ny fametrahana ny fitaovana amin'ny toeran'ny fandrefesana dia azo atao tsara mifanaraka amin'ny fanampian'ny mpanamboatra halavan'ny fitaovana mandeha ho azy. Rehefa hitan'ilay fanadinana ilay masinina, ny halavan'ny fitaovana refesina tsirairay avy dia voatahiry ho azy ao amin'ny latabatra offset Fagor.
6. Fanaraha-maso Fagor
Ny fagor fagor koa dia singa iray tsy mitombina amin'ny milina CNC 3-axis sy 5-axis. Na dia manana an'io fampiasa io aza ny ankamaroan'ny masinina CNC, ny mpanamboatra hafa dia tsy mampiditra azy ao anaty masinina CNC. Raha tsy manana Fagor Controll ny masinanao CNC dia tsara kokoa raha mividy izany amin'ny mpamatsy antoko fahatelo.
7. Ilaina ny mihazakazaka fitsapana alohan'ny hanombohana ny fizotry ny famokarana
Raha ny marina dia tena mandeha ho azy ny tontolon'ny fizotran'ny machining CNC. Izany no antony ilana fitandremana tsara ny filaminana sy ny kalitao. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ny fizotry ny machining mifandraika amin'ny CNC dia tsy maintsy mahafeno ny mason-tsivana sy ny famokarana rehetra amin'ny fitsapana fitsapana. Ny fitsapana fitsapana alohan'ny tena hanombohana ny fizotry ny famokarana dia hamonjy anao amin'ny olana be.
Tombony ho an'i Ouzhan
1. Ouzhan dia manana milina CNC mandroso maherin'ny 30, ny ankamaroany dia nafarana avy any Suisse sy Japon, ny fahamarinanay dia mety hahatratra 0.01mm.
2. Ouzhan dia manana mpiasa maherin'ny 30 ankehitriny ary maherin'ny 10% no manana mari-pahaizana Masters na Doctor. Ny injenierantsika folo dia nahazo diplaoma avy amin'ny anjerimanontolo sinoa ambony misahana ny milina ary manana fahalalana matihanina manan-karena. Ny mpiasa varotra any ivelany dia diplaoma matihanina amin'ny varotra iraisam-pirenena, mahay amin'ny fizotry ny varotra ivelany. .
3. Ouzhan dia manana orinasa mpamokatra milina CNC, hatramin'ny niorenan'ny orinasanay tany Shanghai tamin'ny taona 2005, dia nampiasa ny traikefa nanan-karena nandritra ny am-polony taona maro izahay teo amin'ny sehatry ny milina CNC hahazoana ny fankatoavan'ny mpanjifa maro. Toy ny Trutzschler, iGuzzini, SafeFire, FujiXerox, Ghrepower, Reco sns.